Maxamed Binu Salmaan Oo Fasaxaya In Khamriga Laga Isticmaali Karo Sacuudiga – somalilandtoday.com
Maxamed Binu Salmaan Oo Fasaxaya In Khamriga Laga Isticmaali Karo Sacuudiga
(SLT-Riyadh)-Mas’uuliyiinta Sacuudi Carabiya ayaa ajaaniibta doonaya inay dalkaas maal-gashtaan u sheegay in xanibaadda saaran khamrada la qaadi doono sannadka soo socda, sida ay werisay warbaahinta Bloomberg ee Mareykanka.
Bloomberg ayaa maal-qabeenno ajnabi ah oo si dhow ula shaqeeya dowladda Sacuudiga kasoo xigatay inay maqleen in dowladda ay ka shaqeeneyso sidii loo bixin lahaa cashuur ogolaanaya in dalka lasoo geliyo khamriga.
Mas’uuliyiinta Sacuudiga wax jawaab ah kama ay bixin arrintan, hase yeeshee Bloomberg ayaa sheegtay in xaqiiqda ah in arrintan iminka aad loo hadal hayo ay tahay wax yaab leh.
Waxaa la filayaa in cashuur soo dhoofinta khamriga la siiyo makhaayado iyo hoteello ku yaalla qaar ka mid ah magaalooyinka waa weyn iyo goobo loo dalxiis tago oo Sacuudiga ay ka dhisayaan xeebaha.
Inkasta oo sharciyan uu khamriga mamnuuc ka yahay Sacuudiga, haddana waxaa lagu iibiyaa suuqa madow. Waxaa sidoo kale jira khamri macmiil ah oo guryaha lagu sameeyo oo dadka qaar ay isticmaalaan.